မဒေါင်းလုပ် GTA5PUBG Mode မအဘို့ Windows
မဒေါင်းလုပ် GTA5PUBG Mode
မအခမဲ့ မဒေါင်းလုပ် မအဘို့ Windows (16.40 MB)
မဒေါင်းလုပ် GTA5PUBG Mode,
softmedal.com ၏ခြားနားချက်ဖြင့် GTA5PUBG Mode ဖိုင်ကို အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ Complex Control သည် Grand Theft Auto5အတွက် Battle Royale mod တစ်ခုဖြစ်သည်။ PlayerUnknowns Battledrounds သည် ယမန်နှစ်တွင် မယုံနိုင်လောက်အောင် အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီး ဆက်တိုက် စံချိန်ချိုးခြင်းဖြင့် သူ့ဘာသာသူ နာမည်ရနိုင်ခဲ့သည်။ Steam ပေါ်ရှိ မှတ်တမ်းများအားလုံးကို စုစုပေါင်းနှင့် ချက်ခြင်းဖမ်းယူနိုင်သည့် PUBG သည် ၎င်း၏အောင်မြင်မှုနှင့်အတူ ဂိမ်းများစွာကို လိုက်လျှောက်ခဲ့ပြီး Battle Royale မုဒ်များစွာကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤဂိမ်းများထဲတွင် ပါဝင်ရန် နောက်ဆုံးထွက်ရှိမှုသည် GTA5ဖြစ်သည်။
GTA5ကစားသမားများသည် Complex Control ဟုခေါ်သော mod ဖြင့် Battle Royale ကို တွေ့ကြုံခံစားရမည်ဟု အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သော်လည်း ကစားသမားများသည် GTA5PUBG မုဒ်အတွက် ကွန်ပျူတာပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် Complex Control ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းရန် လုံလောက်မည်ဟု ကောလာဟလများကြားတွင် ရှိနေသည်။
မဒေါင်းလုပ် GTA5(Grand Theft Auto 5)
၂၀၁၃ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင် PlayStation3နှင့် Xbox 360 တို့အတွက် GTA စီးရီးကိုဖန်တီးသူ Rockstar က Grand Theft Auto5ကို GTA စီးရီး၏နောက်ဆုံးဂိမ်းဖြစ်သော GTA 5...
မဒေါင်းလုပ် Ultimate GTA5Superman Mod
Ultimate GTA5Superman Mod သည် GTA V Superman mod အသစ်ဖြစ်သည်။ GTA5Superman mod ကိုအကောင်းဆုံး GTA5mods တီထွင်သူ JulioNiB မှအခမဲ့ download လုပ်ခြင်းသည်လုံးဝအသစ်ဖြစ်သည်။...
မဒေါင်းလုပ် GTA5Space Mode
GTA5Space Mode သည်ကွန်ပျူတာပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ကစားနိုင်သော game mode...
မဒေါင်းလုပ် GTA5Multiplayer Mode
GTA5Multiplayer Mod သည် တရားဝင် GTA5mod မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊ သင့်တွင် ဂိမ်း၏မူရင်းဗားရှင်းရှိပါက၊ ဤ mod ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်အား ဂိမ်းဆာဗာများမှ ပိတ်ပင်ခံရနိုင်သည်။...
မဒေါင်းလုပ် GTA5Trainer
မှတ်ချက် - GTA5Trainer သည်တရားဝင် GTA5ဂိမ်း mode မဟုတ်သောကြောင့် GTA5ဆာဗာများမှသင့်အားပိတ်ပင်ထားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် GTA5မူရင်းရှိခဲ့လျှင် GTA5Trainer...
GTA5Battle Royale မုဒ်အတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာသည် အလွန်ရိုးရှင်းသည်ဟုဆိုကာ၊ ထုတ်လုပ်သူများသည် mod ကို GTA5Mods လိပ်စာမှဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ဂိမ်းဖိုင်များထဲသို့ ချလိုက်ပြီးနောက် လူ 70 ပါရှိသော Battle Royale မုဒ်ကို ဖွင့်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်လုပ်သူများက ပြောကြားခဲ့သည်။
GTA5တွင်၊ အထက်ဖော်ပြပါ ဒေါင်းလုဒ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် လူ 70 နှင့် အမှန်တကယ် PUBG အတွေ့အကြုံရှိရန် သေချာစွာစစ်ဆေးသင့်သည့် Complex Control ကို သင်စမ်းကြည့်နိုင်ပါသည်။
GTA5PUBG Mode မသတ်မှတ်ချက်များ
မဖိုင်အရွယ်အစား: 16.40 MB
တီထွင်သူ: Rockstar Games
Cheat Engine ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ Cheat Engine ဆိုသည်မှာ open source...
DirectX သည်ဆော့ဝဲလ်ကိုအထူးသဖြင့်ဂိမ်းများကိုသင်၏ဗွီဒီယိုနှင့်အသံ hardware...
Ultimate GTA5Superman Mod သည် GTA V Superman mod အသစ်ဖြစ်သည်။ GTA5Superman mod ကိုအကောင်းဆုံး...
Cemu - Wii U emulator သည်သင်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Wii U ဂိမ်းများကိုကစားလိုလျှင်သုံးနိုင်သည်။ ...
GTA San Andreas 100% Save file...
Battle.net ကိုနာမည်ကြီးဂိမ်းဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ Blizzard ၏ဂိမ်းများကိုဖွင့်ရန်၊...
Rockstar Social Club သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် GTA 5၊ Max Payne3နှင့် LA Noire စသည့်အရည်အသွေးမြင့်...
American Truck Simulator Save File
သင် American Truck Simulator ၌စတီယာရင်ဘီးကိုငြီးငွေ့ပြီးအနည်းငယ်ချမ်းသာချင်လျှင်ဤ save file...
Tunngle သည်မျိုးဆက်သစ်ဂိမ်းကစားခြင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ p2p နှင့် VPN...
မှတ်ချက် - GTA5Trainer သည်တရားဝင် GTA5ဂိမ်း mode မဟုတ်သောကြောင့် GTA 5...
မှတ်ချက်။ GTA5Redux သည်တရားဝင် GTA5mod မဟုတ်ပါ။ ဤ mod...
RiftCat Desktop Client ဆိုသည်မှာသင်၏မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် Oculus Rift သို့မဟုတ် HTC Vive...
Counter-Strike: Classic Offensive သည် CS 1.6 GO...
ZSNES သည် PC ပေါ်တွင် Super Nintendo ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်အအောင်မြင်ဆုံး emulator အဖြစ်ထင်ရှားသည်။...
GTA5Space Mode သည်ကွန်ပျူတာပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ကစားနိုင်သော game mode တစ်ခုဖြစ်သည်။ GTA 5...
console ပြိုင်ပွဲများ၌ Nintendo 64 သည် PlayStation ဂိမ်းများကြောင့်သွေးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။...
Half-Life နှင့်၎င်း၏ mods များအတွက် Bot pack ။ ဤပရိုဂရမ်ဖြင့်သင် Half-Life, Team Fortress, Opposing...
ဂိမ်းဆွေးနွှေးခြင်း - ၎င်းကိုငါ run...
Just Cause 3: Multiplayer Mod သည်သင်၏ဂိမ်းဖြစ်သည့် Just Cause3ဂိမ်းကိုသင်၏ Steam...
Chankast သည် SEGA Dreamcast ဂိမ်းများကိုစုဆောင်းထားသည့် console...
Multi Theft Auto သည် Rockstar ဂန္ထဝင်နှင့် GTA စီးရီး၏အကျော်ကြားဆုံးဂိမ်းများထဲမှ GTA San Andreas...
CRYENGINE သည် Crysis3နှင့် Ryse: Son of Rome...
Need For Speed ​​Carbon patch တွင်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုဖြည့်ဆည်းရန် add-ons များပါ ၀ င်သည်။...
Need For Speed, Most Wanted ၏အစဉ်အလာသစ်အတွက်ထုတ်လွှင့်သောဤ patch...
Battle Nations သည်သင်ကစားနိုင်သောအွန်လိုင်းနည်းဗျူဟာဂိမ်းဖြစ်သည်။...
Gamepad မြေပုံသည် Xinput အစီအစဉ်နှင့် gamepad ကိုသုံးလျှင်အလွန်အသုံးဝင်သောဆော့ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ...
RockNES သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာ၌ Nintendo ၏ဒဏ္legendaryာရီဂိမ်းစက်၊ Nintendo Entertainment System...
The Witcher3First Person Mode
The Witcher3First Person Mode သည်တတိယပုဂ္ဂိုလ်သေနတ်သမား The Witcher3အတွက်တီထွင်ထားသော mods...
သတိပြုပါ၊ Mega City One သည် Half Life 2: Episode Two အတွက်တီထွင်ထားသော mod တစ်ခုဖြစ်သည်၊...